Jikwaa mkpu nke ekwentị ọ bụla na bọtịnụ olu | Gam akporosis
Jikwaa mkpu nke ekwentị ọ bụla na bọtịnụ olu
La mkpu elekere ekwe ntị anyị aghọọla elekere mgbanaka nke ọtụtụ nde ndị Spain. Eeh, ihe kachasịkarị bụ na anyị na-enyo enyo na ọkara ụra, na-ekpe ekpere ka anyị chọta bọtịnụ ziri ezi iji nweta nkeji ise ma ọ bụ 5 nke mgbagha ọzọ. Mana, n'ezie, karịa otu oge ị ga-ehie ụzọ mgbe ịpịrị na ihuenyo ahụ.
Luckily, e nwere nnọọ mfe ngwọta: jiri olu akara igodo na ekwentị anyị kwụsịtụ mkpu, ma ọ bụ ịgbatị anyị oge na bed a obere oge. Ee, site na ngagharị a dị mfe ị nwere ike ijikwa mkpu.
Ee, iji igodo olu ị ga-agbanyụ mkpu ekwentị gị
Ikekwe mgbe ị na-agụ nke a ị na-eche na anyị na gị ga-anọnyere. Na, arụmọrụ a na-abịa na ndabara na ụfọdụ ekwentị mkpanaaka, mana mara na ọ bụghị ụdị niile dị n'ahịa na-enye gị ohere ijikwa mkpu site na igodo njikwa olu. Gị ama dakọtara? Echegbula onwe gị, anyị ga-egosi gị otu esi edozi ya.
Iji mee nke a, ị ga-agarịrị ngwa elekere Google, nke dị na ntọala mkpu. Mgbe ahụ, n'akụkụ aka nri nke elu ị ga-ahụ na ị nwere nhọrọ iji nweta menu ndị nwere ọnọdụ (ee, akara ngosi njirimara atọ) iji nwee ike ịnweta Ntọala ahụ. Ugbu a, na nkebi a, chọọ nhọrọ «Mpịakọta bọtịnụ». N'ikpeazụ ị ga-ahụ na ịnwere ike ịgbalite arụmọrụ iji gbanyụọ mkpu site na iji igodo ndị a.
Kacha nkịtị ihe bụ na ọ bụla ekwentị rutere na google watch ngwa arụnyere na, ọ bụ ezie na ọtụtụ ụlọ ọrụ na-eji akwa omenala, arụmọrụ a ka na-arụ ọrụ na-enweghị nnukwu nsogbu. Ọ bụghị gị ikpe? Echegbula, ihe mere bụ na ekwentị gị nwere ndị dị otú ahụ a ahaziri interface na ọ na-tutu amama a nhọrọ.
Iji mee nke a, anyị nwekwara ngwọta dị mfe: naanị ị ga-ebudata ngwa ahụ site na elekere google inwe ike ịkwụsị mkpu site na ịpị igodo njikwa olu.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Jikwaa mkpu nke ekwentị ọ bụla na bọtịnụ olu
Andres Santander dijo
Ọ bara ezigbo uru m na-eji ya ugboro ugboro, ana m ekele gị nke ukwuu
Zaghachi Andrés Santander
Esi rụọ ọrụ Ọchịchịrị Ọnọdụ na Telegram
Ngwa Google kachasị mma maka gam akporo